Maalinta: Meey 11, 2019
Aagagga cusub ee warshadaha si loo siiyo shaqo
Aagga warshadaha ee cusub ee loo yaqaan '6 Zone' wuxuu yareyn doonaa hoos u dhaca hadda jira ee 1.7 bilyan oo doolar wuxuuna u oggolaanayaa maalgashiga 49 bilyan ee TL ee gobollada iyadoo la adeegsanayo 23.1 kun oo shaqo oo cusub. Gobolladaas ka sokow, mashruuca dooxada Filyos, [More ...]
Mehmet Ateş, Gudoomiyaha iyo kuxigeenka Maareeyaha Guud ee Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHMİ), oo dusha kala socda howlaha ka socda garoonka diyaaradaha Esenboğa, wuxuu warbixin ka helay maamuleyaasha garoonka diyaaradaha iyo mas'uuliyiinta shirkada qandaraasleyda. Shaqooyinka loo qorsheeyay [More ...]
Casho sharaftan oo ay qabteen Agaasimeyaasha Guud ee Wadooyinka munaasabada Ramadaanka Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M.Cahit TURHAN, Agaasimaha Guud ee Wadooyinka Abdulkadir URALOĞLU iyo xubno ka socda Ururka Wadooyinka Waaweyn ayaa ka soo qeyb galay. Cashada afurka ee ka bilaabata akhriska Quraanka, [More ...]
TCDD Izmir 3. Furitaanka Bandhigga Bandhigga N rinji iyo Nashaadaad Nashaad X ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Xannaano-maalmeedka iyo Xannaano-maalmeedka Maalintii ee Agaasinka Gobolku hoos tago sannad dugsiyeedka 2018-2019. Munaasabadda lagu qabtay TCDD Tilmaanta Fanka cusub, [More ...]
Gaadiidka Isbitaalka Magaalada waxaa bixiya Khadka Bursaray
Waqtigu si dhakhso badan ayuu u dhammaadaa Theehir Mashruuca Isbitaalka Magaalada ayaa ah tusaalaha ugu dambeeya ee si xawli ah u socda. Waad ogtahay, waxaa loo yaqaan değişim ilaa shalay ”si loo macneeyo isbadalkan deg degga ah. [More ...]
Dalxiiska Ciidanku wuxuu noqon doonaa 12 Bishan ... Baabuurka fiilada wuxuu shaqeyn doonaa ilaa goor dambe
Dalxiiska ee Ordu wuxuu noqon doonaa Bisha 12… Gaariga Cable wuxuu shaqeyn doonaa xilli dambe: Duqa Magaalada Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler wuxuu sheegay in Ordu ay leedahay awood dalxiis oo aad u weyn oo leh baddeeda iyo dabeecadeeda. [More ...]
Dhibaatada Maskaxda ee Guruubka ah ee Guruubka ah ee Guruubka
Ehelka dadkii ku naf waayey shilkii tareenka ee ka dhacay Çorlu, waxay bilaabeen tijaabadii dadkii mas'uulka ka ahaa geerida marxuumka waxaa lagu aasay Uzunköprü'de. Bayaanka vigil iyo saxaafada horteeda taallo tiirarka cadaalada ee maxkamada Uzunköprü Courthouse, xisbi siyaasadeed [More ...]
Nidaamka Isgaadhsiinta ee Macallinka Guriga ayaa lagu dhisaa Beysehir
Iskuxirka Iskuxirka Gaadiidka Dawladaha Hoose ee Magaalada Konya (UKOME) waxay go aansatay inay dhisto nidaam calaamad ah oo iftiin leh Beyşehir Dowlada hoose ee isgoyska Antalya Avenue horteeda Xarunta Macalinka ayaa taageerta shaqada. Kuxiriira Agaasinka Sayniska [More ...]
Spear, Baaritaanka Waxbarashada Gaadiidka Gaadiidka
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Diyarbakir Adnan Selcuk Mızraklı, Dowlada Hoose ee Magaalo Weynta Caruurta ee loo sameeyay abuurida wacyigelinta taraafikada 10 kun oo mitir murabac ah oo laga dhisay Beerta Waxbarshada Gaadiidka, ayaa sahan sameysay. Duqa Magaalada Magaalada Diyarbakır Duqa Magaalada [More ...]
Duqa Magaalada Antalya ee Magaalada Muhittin Böcek ayaa la kulmay gudoomiya Golaha Golaha Magaalada Caasimadda, Maqaalka 33 ayaa looga hadlay shirkii caadiga ahaa ee imaatinka. 3 waxay ku dhawaaqeysaa dhismaha Wadooyinka khadka tareenka ee Wajiga III ee Maali [More ...]
Kormeer adag oo loogu talagalay gaadiidka raaxada ee Manisa ayaa sii socota
Waaxda Gaadiidka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Manisa, oo kantarool ku sameysa gawaarida rakaabka qaada ee ku sugan Manisa oo dhan, ayaa kormeer ku sameysay gawaarida adeega iyo tagaasida ganacsiga ee Saruhanli. Laga bilaabo nadiifinta baabuurta ilaa dharka chauffeur [More ...]
Gebze Bayramoge Street ayaa dib loo cusbooneysiiyay
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo ahmiyada siisa mashruucyada gaadiidka, waxay cusbooneysiisaa wadooyinka burburay iyo sidoo kale wadooyin cusub oo ka dhigaya kuwo casri ah. Macnaha guud, D - 100 wadada weyn ee Istanbul - gobolka Kocaeli [More ...]
Maanta taariikhda: 11 May 1939 Railways State
Maanta, saldhigga dhismaha cusub ee 11 May 1939 Maamulka Dimoqraadiyada ee Ankara ayaa la dhigay